Bineensota bosonaa Itoophiyaa: Saawudiin daddabarsitoota hamaaketa boorsaatti qabatanii galuuf yaalan to'atte - BBC News Afaan Oromoo
Bineensota bosonaa Itoophiyaa: Saawudiin daddabarsitoota hamaaketa boorsaatti qabatanii galuuf yaalan to'atte
Humnoonni nageenyaa Saawudii namoota karaa seeraan alaan hamaaketa gara biyyattiitti galchaa turan to'annoo jala oolchaniiru.
Miidiyaan Saawudii akka gabaasetti daddabarsitoonni seeraan alaa kunniin miilaan gochuun Yaman keessa karaa dheeraa qaxxaamuruun daangaa Saawudii qaqqaban.
Eegdonni nageenyaa daangaarraa boorsaa jarri baatan keessatti waan sosocho'u wayii argan.
Boorsichi oggaa banamu hamaaketonni keessatti argaman.
Itoophiyaatti namoonni maaliif qocaa adamsu?
Bineensonni kun biyyoota Gaanfa Afrikaarraa gara biyyoota galoo galaanaatti daddabarfamuun, akka bineensota manaa madaqfamuuf gurguramu.
Miidiyaan Saawudii Al-Madina jedhamu, hamaaketoota qabaman sadan jedhee viidiyoo Youtube gubbaa maxxanseera.
Warri kunuunsa bineensotaa irratti hojjetan, hedduun bineensota akkasii imala gubbaatti lubbuu dhabu jeedhu.
Daldalli seeraan alaa akkasii lakkoofsa hamaaketaa biyyoota Itoophiyaa fi Somaaliyaa keessa jiru akka yaaddoo keessa seenu taasiseera.
Mootummaan Itoophiyaa quba qabaa?
Ilmooleen hamaaketaafi leencaa Itoophiyaarraa qabamuun gara biyyoota Baha Giddugaleessaatti, Somaalilaandiin godhanii akka bahan mootummaan odeeffannoo akka qabu BBCn odeeffateera.
Abbaa Taayitaa Kunuunsa Bineensota Bosonaa Itoophiyaatti, Daarektara To'annoo daddabarsa Bineensota Bosonaa kan ta'an Obbo Daani'el Phaawulos, maddi daddabarsa seeraan alaa kun baayyinaan naannoo Somaalee irraati jedhu.
Maloota daddabarsitoonni naannoo sana jiran itti fayyadaman keessaa tokko, jerikaana keelloo bishaan itti waraaban keessa, ilmoolee hamaaketaa afur naqanii wayita deeman kan qabamanis jiru.
Ji'atti ilmooleen hamaaketaa yoo xiqqaate afur tahan biyyaa bahuuf yoo jedhan akka qabaman ogeessi kun BBCtti himaniiru.
Bineensota qabaman kanneeniifis wiirtuun kunuunsaa akka jirus nutti himaniiru.
Abbaan Taayitaan kunis qaamolee garagaraa waliin qindoomuun daldala seeraan alaa kana to'achaa kan jiru tahus, daddabarsitoonni seeraan alaa yeroo yeroon tooftaa jijjiiruun isaanii danqaa guddaadhas jedhan.
Warri daldala kanarratti hirmaatan daangaa Itoophiyaa keessatti ilmoo hamaaketaa tokkoof Birriin 15,000 kan kanfalamuuf yogguu tahu, gabaa gurraacha biyyoota baha giddugaleessaatti haga doolaara 10,000 yookaan Birrii Itoophiyaa 300,000 olitti gurguramu.
Goodayyaa suuraa Hamaaketa dahoo 'Insisaat Kottee' keessatti argaman
Gabaasa amma dura BBCn hojjete keessati, hamaaketaa fi bineensota bosonaa biroo Itoophiyaarraa seeraan alaan daddabarfamuuf jedhan oolfamuun gara dhaabbta Born Free magaalaa Hoolataatti argamutti kan geeffaman jiru.
Bineensota bosonaa Itoophiyaa: Seenaa bineensota to'annaa namootaa jala turanii
Viidiyoo Ameerikaa Michigaan keessatti kunuunsitoonni risaa cabbiin danqe tokko baraaran
18 Guraandhala 2019
'Waa'een barattoota 'ugguraman' jedhamee akkuma hibboo ta'etti jira'
Leenjisaan milkaa'ina atileetiksii Itoophiyaa duuba jiran maal jedhu?
'Milishoonni doqdoqee oofaa turan' loltoota 20 ajjeessan
Icciitiin loltoonni 54 waggoota dheeraa dura achi buuteen dhibame hiibboo ta’eema jira
Rokkeetiin furguggifame embaasii Ameerikaa rukute
Taphataan kubbaa kaachoo Ameerikaa balaa helikooptaraan du'e
Guyyaa 6 keessatti hospitaalli akkamiin ijaaramaa?
Dorgommii nyaataarratti dubartiin tokko baayyee nyaachuun lubbuun darbe